La Pyo Phyu – Page2– Daily Latest News
အမှုလျော်ကြေးဒေါ်လာ(၁၅)သန်းကို တစ်ပြားမှမယူဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ မင်းသားကြီး Johnny Depp
June 12, 2022 Kyaw 0
ယောကျာ်းပီသစွာ ခန့်ညားကြည်လင်ပြီး ကပ္ပတိန်ဂျက်စပဲရိုးလို့ လူသိများကျော်ကြားတဲ့ Johnny Depp တစ်ယောက် သိပ်မကြာခင်က သူ့အပေါ် ရက်စက်လွန်းခဲ့တဲ့ Amber Heard ကို အသရေဖျက်မှုနဲ့ တရားစွဲကာ အမှုနိုင်ခဲ့တာ ပရိတ်သတ်တွေသိကြမှာပါ။ ဒီလို အသရေဖျက်မှု နဲ့ တရားစွဲခဲ့ရာမှ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက် အမှုအတွက် လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ(၁၅)သန်းကို […]
ပရိပ်သက်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်ချစ်သုဝေကတော့ တော်လှန်ရေးအတွက် ပါဝင်ကြိုးစားပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ် အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲ ပညာရေးနဲ့ပါတ် သက်ပြီး ချစ်သုဝေက ယခုလိုပဲ ပြောခဲ့ပါတယ် ပညာတတ်​မြောက်ဖို့ကလည်းအ​ရေးပါပြီး စစ်ကျွန်​ပညာ​ရေး​အောက်လူညွန့်မတုံး​ချင်တဲ့ မိဘ​တွေမှာ အပူမီးဝိုင်းရတယ်..Trezaလည်းမိဘဖြစ်လို့ လက်လှမ်းမီရာနားလည်သ​လောက်​လေး ​ဝေမျှပါရ​စေ!!! 🏫CBE ပြည်သူ့ပညာ​ရေး online ​ကျောင်း ​📣နေရာ👉 internetလိုင်းရသည့်မည်သည့်​နေရာကမဆိုတက်​ရောက်နိုင် 📣ဖွင့်ထားပြီးအ​ရေအတွက်👉 44​ကျောင်း(📣NUG […]
ဗျူဟာခင်းပြီးပြီ အကွက်တွေ စိပ်လာပြီ အမြန်ရွှေ့ကွက်တွေလာပြီ NUG ကလည်း စစ်ရေးမြှင့်တင်မယ် ချောင်ပိတ်သွားတဲ့ စစ်အုပ်စုက ထွက်ပေါက်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ..?
ဗျူဟာခင်းပြီးပြီ အကွက်တွေ စိပ်လာပြီ အမြန်ရွှေ့ကွက်တွေလာပြီ NUG ကလည်း စစ်ရေးမြှင့်တင်မယ် ချောင်ပိတ်သွားတဲ့ စစ်အုပ်စုက ထွက်ပေါက်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ..? စစ်တုရင်စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဗျူဟာခင်းပြီးပြီပေါ့။ အကွက်တွေ စိပ်လာပြီ။ အမြန်ရွှေ့ကွက်တွေလာပြီပေါ့။NUG ကလည်းစစ်ရေးမြှင့်တင်မယ်လို့ပြောထားတယ်။ ချောင်ပိတ်သွားတဲ့စစ်အုပ်စုကထွက်ပေါက်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။ ဘယ်လိုချောင်ပိတ်မိတာလဲ ယူအက်စ်သံတမန်ထပ်ရောက်လာတယ် တွေ့စရာရှိသွက်သွက်တွေ့၊ ထုတ်ပြန်စရာရှိ၊မြန်မြန်ထုတ်ပြန်တယ်။ အာဆီယံ+အိန္ဒိယမှာ တက်ရနိုးနိုး စကစရဲ့နောက်ဆုံးမျော်လင့်ချက်လည်း အိုးမည်းအသုတ်ခံရ။ဟိုကအမြန်ထုတ်ပြန်တယ်။စစ်ကောင်စီတက်ခွင့်မရှိဘူးဒါပါပဲ။အဲဒီတော့ သံတမန်ရေးမှာသူတို့ကိုဘယ်သူ […]
ထိုင်ဝမ်ကိုဖဲ့ထုတ်ရန်ကြိုးပမ်းလာပါက စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန်တွန့်ဆုတ်နေမည်မဟုတ်ဟု အမေရိကန်ကို တရုတ်သတိပေး
တရုတ်အစိုးရသည်ငည် ထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးကြေညာပါက ‘စစ်ပွဲဆင်နွှဲရန် တွန့်ဆုတ်နေမည်မဟုတ်’ဟု တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးက ယခုသတင်းပတ်သောကြာနေ့က အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကို သတိပေးပြောကြား လိုက်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Wei Fenghe သည် စင်္ကာပူတွင်ကျင်းပသည့် Shangri-La Dialogue လုံခြုံရေးထိပ် သီးအစည်းအဝေးတွင် အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin နှင့် အစည်းအဝေးပြင်ပ ပထမဆုံးမျက် နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံစဉ် […]
NUG PDF ကို အပြတ်ချေမှုန်းမယ်ကနေ အလင်းဝင်ရင် ကြိုဆိုမယ်ဆိုတာ မနိုင်တော့ပါဘူး ဝန်ခံလိုက်တဲ့သဘောပဲ
ယနေ့တွင် PDF များအလင်းဝင်ပါက ကြိုဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီမှ ကြေငြာချက်ထုတ်ရာ နိုင်ငံရေး စစ််ရေးလေ့လာသူများမှ “အရင်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာပဲ အပြတ်ချေမှုန်းမယ်ဆိုပြီး အခုလို ပြောင်းလဲသွားတာ မနိုင်တော့လို့ ဗျူဟာပြောင်းသွားတာပဲ ခက်တာက PDF က လက်နက်ချဖို့နေနေသာသာ သူ့စစ်သားတွေတောင် PDF EAO တွေဆီ အလင်းပြန်ဝင်နေကြတာဆိုတော့ ဒီဗျူဟာလည်း […]
မြန်မာပြည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာအမြစ်တွယ်ခဲ့တဲ့စနစ်ဆိုး အပြီးသတ်ရိုက်ချိုးဖို့အတွက် ငါတို့မျိုးဆက်က အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာမယ့် တကယ့်အစစ်မှန်လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ ငါတို့မျိုးဆက်ပဲကဆင်နွဲခွင့်ရတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အဆိုးရွားဆုံးပြည်တွင်းစစ်တွေကို အဆုံးသတ် တကယ့်လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရှာပေးခဲ့ကြသူတွေအဖြစ် ငါတို့မျိုးဆက်ကပဲ သမိုင်းတွင်ရစ်လိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး လာမယ့်အနာဂတ်မျိုးဆက် ငါတို့မြန်မာတိုင်းရင်းသား ရင်သွေးတွေလက်ထက်ကျရင် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တတ် လက်ခမောင်းခတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေအဖြစ် ငါတို့မျိုးဆက်ကပဲ ဖန်ဆင်းထားရစ်နိုင်လိမ့်မယ်။ တော်လှန်ရေးကြီးအောင်သွားရင် တာဝန်ပြီးပြီဆိုပြီး […]
‘PDFတွေ လ က်နက်အပ်နှံပါက လက်ခံမည်’ဆိုတဲ့ မအလတိုု့ထုတ်ပြန်ချက်အပါ် ဒဲ့ေ ဆာ်လိုက်တဲ့ ပန်ဆယ်လိုု
ပြည်သူ့အချစ်တော် ပန်ဆယ်လိုဟာ စစ်တပ်အာဏာသ.ိမ်းသည့် ၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီး ယခုအချိန်ထိ တော်လှန်ရေးကြီးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းရပ်တည်ခဲ့သူပါ။ ပြတ်သားတဲ့ ရပ်တည်ချက်၊ ခိုင်မာတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့အတူ သူမ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ တော်လှန်ရေးကြီးကို အစွမ်းကုန် အားဖြည့်ပေးနေခဲ့တာ အခုဆိုရင် တစ်နှစ်ကျော်ကြာကာလကိုတောင် ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ အခုလို တော်လှန်ရေးကြီး အချိန်ကြာညောင်းလာပေမယ့် သူမရဲ့ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကတော့ […]
ချစ်သူတို့သဘာဝ ချိန်းတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ ဆွီဝတ်ရည်သောင်း
အဆိုတော် ဆွိဝတ်ရည်သောင်းနဲ့ အဆိုတော် ကျားပေါ က်တို့ရဲ့အချစ်ရေးဟာတော့ပရိသတ်တွေကြားမှာ စိတ် ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတစ်ခုပါပဲ။ တူညီတဲ့ ဂီတနယ်ပယ်ထဲမှာ ကျင်လည်ရင်း ချစ်ကြိုက်သွားခဲ့တဲ့ ကျားပေါက်နဲ့ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းတို့ဟာ သူတို့ရဲ့အချစ်ရေးကို လူသိရှင်ကြား အသိပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဆွိဝတ်ရည်သောင်းကတော့ ကျားပေါက်ဟာ လူပျိုတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် ကျားပေါက်ရဲ့အချစ်နဲ့မေတ္တာတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီး ကျားပေါက်နဲ့ လက်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်သူသက်တမ်းတစ်ခုရရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တရားဝင်ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကိုလည်း […]
စာဖတ်ပရိ သတ်ကြီးရေ ဆယ်စုနှစ် များစွာကို မှီခဲ့တဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆော င်ကြီးတစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ရန်ကျော် ကိုတော့ အားလုံးပဲ မှတ်မိကြအုန်း မှာပါ။ သူကတော့ အဆိုတော် မေခလာ ရဲ့ ချစ်လှစွာ သောခ င်ပွန်းဖြစ်ပြီးပျော် ရွှင်တဲ့အိမ်ထော င်ရေးကို တည်ထောင် ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကျော် […]
“လူနှစ်ဦးမေတ္တာမျှပြီဆိုရင် မေတ္တာပဲမျှလို့မရဘူး တခြားရှိသမျှအကုန်လုံးပါမျှဝေခံစားရပါတယ်” ဆိုတဲ့ ခီးမောင်နှံရဲ့HAPPY 22nd ANNIVERSARY, my love!
လူနှဦးမေတ္တာမျှတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့စကားလုံးလေးကလှသလောက် လက်တွေ့မှမလွယ်လှပါဘူး။ မေတ္တာမျှပြီဆိုရင် မေတ္တာပဲမျှလို့မရဘူး။ တခြားရှိသမျှအကုန်လုံးပါမျှဝေခံစားရပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကိုသူယူရသလို သူ့ရဲ့ကောင်းခြင်း(ကောင်းခြင်း😉) တွေကိုလည်းကိုယ်ယူရတယ်။ သူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေလျော့သွားသလို ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေလဲလျော့လိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အပူတွေသူယူရသလို သူ့ရဲ့အပူတွေလည်းကိုယ်ကမျှဝေခံစားပေးရတယ်။ ဆိုတော့ တာတိုမှာတော့မသိသာပေမယ့် တာဝေးမှာတော့သိသာလာမယ်။ တွေးစရာတွေရှိလာတယ်။ ငါ့ဘဝကြီးကို ဒီလူကြီးဆီမှာပုံအပ်ထားရတာတန်ရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာလည်းမသိစိတ်မှာရှိလာတယ်။ အမျိုးသမီးတွေကတော့ပိုတွေးမှာပေါ့နော်။ အမျိုးသမီးတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပိုနှမြောတတ်ကြတာဆိုတော့။ 😁 ဒါပေမယ့် ဒီမေးခွန်းက one […]